တစ်ဦး Glow ပန်း Make လုပ်နည်း
အဆိုပါအမှောင်အတွက် Glow ဒါကရီးရဲလ်ပန်းပွင့်
ရဲပန်း - Method ကို # 1
ဒါဟာအနက်ရောင် (ချောင်း) အလင်းအောက်မှာ glows သေချာစေရန်တစ်ဦးကိုမီးမောင်းထိုးပြကလောင်စမ်းကြည့်ပါ။ အဝါရောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ နဲ့အခြားအရောင်များတောက် လည်းတောက်ပ။
ရေ၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏသို့မှင် pad ပါကနေဆိုးဆေးညှစ်။
အဆိုပါချောင်းမှင်စုပ်ယူမှအပွင့်အဘို့နာရီပေါင်းများစွာ Allow ။ အပွင့်တို့သည်မှင်အတွက်ယူထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပွင့်ချပ်ပါလိမ့်မယ် အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာတောက် ။
ရဲပန်း - Method ကို # 2
သင်သင်ယူဖို့အံ့အားသင့်ဖြစ်ပါ့ အများအပြားပန်းပွင့် သဘာဝကျကျအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အောက်မှာတောက် ချောင်းအလင်း ? အပွင့်ဝတ်မှုန်ကူးထားတဲ့တချို့ကအင်းဆက်ပိုးမွှားသည်, ခရမ်းလွန်အတွက်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ခရမ်းလွန်-အရောင်ဖြစ်ကြောင်းအဖြူရောင်ပန်းပွင့်ပါပဲ။ သူတို့ကိုသင်ကွီနိုင်ပါရှိသည်ရာလုပ်သူများရေ, အစာကျွေးခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာအဖြူပန်းပွင့်ရဲ့အလင်းရောင်ပေါ်လွင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကွီနိုင်မယ့်အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာတောက်ပတဲ့အပြာရောင် glows ။
အပွင့်၏ Petaling သို့ထည့်သွင်းခံရရန်ကွီနိုင်ဘို့နာရီပေါင်းများစွာ Allow ။
တစ်ဦးအပေါ် Turn အနက်ရောင်အလင်း နှင့်သင့်ပန်းပွင့်ကိုခံစား။
ရဲပန်း - Method ကို # 3
ပြင်ဆင်ပါ ရဲရေ အစားအသောက်များတွင်သုံးပြီး လုပ်သူများရေ ဒါမှမဟုတ်သင်အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာတောက်ပါလိမ့်မယ်ထူထောင်ခဲ့ကြကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြမဆိုအရောင်။ ဒါဟာ Thin ရဲဆေးသုတ်သုံးစွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပန်းပွင့် accomodate ဖို့လုံလောက်တဲ့ကြီးမားသောဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ခွက်ကိုရှာပါ။ အဆိုပါရဲအရည်နှင့်အတူဤကွန်တိန်နာဖြည့်ပါ။
အပွင့်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့်အရည်အတွက်ကိုဗတ္တိဇံ။ ပူဖောင်းတွေနဲ့ဒေသများအတွက်ချောင်းသို့မဟုတ်ကောက်မည်မဟုတ်ကတည်းကညင်ညင်သာသာမဆိုလေကြောင်းပူဖောင်းဖယ်ရှားရန်န်းကျင်အပွင့် swish င်း၏အရောင် ။
သင့်ရဲ့ပန်းပွင့်သည့်ဆိုးဆေးကိုစုပ်ယူခွင့်ပြုရန်။ ကိုယ့်အစက်များသောလွှမ်းခြုံအတွက်ပန်းပွင့်ရလဒ်တွေကိုနှစ်။ သငျသညျတောက်ပရဲပန်းပွင့်ချင်လျှင်, ပန်းပွင့်တစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့မိမိတို့ပွင့်ချပ်သို့တိုက်ရိုက်အရောင်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ကပတ်ပတ်လည်လြော့စက္ကူပဝါတစ်နည်းနည်းအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကများက hydrated အပွင့်များ၏ပင်စည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အဆိုပါ Remove ရဲပန်းပွင့် သည့်အရည်ကနေ။ သငျသညျရေနှင့်ပြည့်စုံတစ်ပန်းအိုးထဲမှာနေရာချသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာပြသနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး Glow ပန်းပြုလုပ်ခြင်းများအတွက်သိကောင်းစရာများ
အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ဖျော့ပန်းပွင့်နက်ရှိုင်းစွာရောင်စုံပွင့်ချပ်တွေနဲ့ပန်းပွင့်ထက်အများကြီးပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။ မှောင်မိုက်ရောင်စုံပန်းပွင့်လုပ်ကွက်များတွင်အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်းလုံးနီးပါး ရဲအလင်း ။
သငျသညျလတ်ဆတ်ကျန်းမာပန်းပွင့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ နီးပါးသေကြောင်းကိုပန်းပွင့်ရေကိုမသောက်ရကြလိမ့်မည်နှင့်တောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသင်ပန်းပွင့်ဦးခေါင်းသို့တိုက်ရိုက်မှင်ထိုးသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်သောရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်ကအစားပဲလတ်ဆတ်တဲ့ပန်းပွင့်ကိုမသုံးပါ့မလား
အခြို့သောပန်းပွင့်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဇော်မွှားပန်းနှင့်လုပ်ပေးဖို့နှင်းဆီပန်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်အစားအစာအရောင်နှင့်အတူဆိုးဆေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုပန်းပွင့်တစ်ဦးရဲပန်းပွင့်အောင်များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
သငျသညျဖျောပွဖို့တောင်းဆိုကြောင်းအင်တာနက်အပေါ်အချို့သောဗီဒီယိုများရှိပါတယ် ပန်းပွင့်ရဲအောင်ဘယ်လို ။ ဗီဒီယိုအပွင့်ထားပြီးသားရဲသို့မဟုတ်အနက်ရောင်အလင်းအောက်မှာချောင်းသို့မဟုတ်င်း၏ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဓာတုပေးခြင်းပါဝင်လျှင်, ညွှန်ကြားချက်များကိုတရားဝင်များမှာအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျပွဲစဉ်အကြီးအကဲများနှင့်ပါအောက်ဆိုဒ်နဲ့တူမဖြစ်နိုင်ဓာတုပစ္စည်းရောမွှေဖို့တောင်းဆိုကြောင်းဗီဒီယိုများတစ်လိမ်လည်မှုဖြစ်ကြသည်။ သူများသည်ဓာတုပစ္စည်းသင့်ရဲ့ပန်းပွင့်အလင်းရောင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အရူးလုပ်မရကြဘူး!
တစ်ဦး Endothermic တုံ့ပြန်မှု Create
မီး-အသက်ရှူ: ဘယ်လို Safely မီးရှူဖို့
ဆိုဒီယမ်နိုက်ထရိတ် crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို
တစ်ဦးဟယ်လိုဂျက်ဏ Lantern ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေမည်သို့
တစ်ဦး Glass ကို Density ဆန္ဒပြတစ်သက်တ Make ရန်ကဘယ်လို
ရိုးရှင်းသော Candy Osmosis စမ်းသပ်မှု
အရောင်အဘို့အသတ္တုဆားကိုရှာပါရန်အဘယ်မှာရှိ - အရောင်မီးဘေး
Aretha Franklin ရဲ့9အကောင်းဆုံးပေါ့ပ်သီချင်းများ
အီလက်ထရွန်ပို့ဆောင်ရေး Chain နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုရှင်းလင်းချက်
အီတလီအတွက် preposition "Di" အသုံးပြုနည်း6နည်းလမ်းများ
အီတလီကြိယာ conjugation: Frequentare
တစ်ဦး Exothermic ဓာတုတုံ့ပြန်မှုဖန်တီးနည်း
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ် Horatio G. အ Wright
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူအဘို့အစကားပြောသော Practice Online
Thomas Aquinas အမည်ရှိကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Case Western Reserve တက္ကသိုလ်ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
ဘယ်အချိန်မှာ Laetare တနင်္ဂနွေလား?
ပုဂံဆုတောင်းချက်ပုတီး Make လုပ်နည်း
Neapolitan အဘိဓါန်စစ်ပွဲ: Tolentino ၏တိုက်ပွဲ
'' The Magic Toyshop '' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အလယျပိုငျး Paleolithic မှ Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
သိပ္ပံ Geeks နှင့်မလိုလားသည်များအတွက်လက်ဆောင်များ
သင့်ရဲ့ပသခါပွဲကို Seder လမ်းပြဘယ်လို-
ပထမကမ္ဘာစစ်: RAF SE5
အသုဘအတှကျအနျ Classical Music ကို